Sangana nevatyairi vatatu veMushandisi Kuwana Campaign Performance | Martech Zone
Kune nzira dzakawanda dzekuvandudza mushandirapamwe. Zvese zvinhu kubva paruvara parunhare rwekuita bhatani kuyedza chikuva nyowani zvinogona kukupa zvirinani mhedzisiro.
Asi izvo hazvireve kuti yega UA (YeMushandisi Kuwana) yekumisikidza zano iwe yauchamhanya mhanya nayo yakakodzera kuita.
Izvi zvinonyanya kuitika kana uine zviwanikwa zvishoma. Kana iwe uri pachikwata chidiki, kana iwe uine zvipingamupinyi zvebhajeti kana zvipingamupinyi zvenguva, izvo zviganho zvinokutadzisa kubva kuyedza hunyengeri hwese hwekuita zviri mubhuku.
Kunyangwe iwe uri wega, uye uine zviwanikwa zvese zvaunoda, panogara paine nyaya yekutarisa.
Tarisa inogona kunge iri chinhu chedu chakakosha kwazvo. Pakati pe ruzha rwese rwe- zuva-nezuva- mushandirapamwe manejimendi, kusarudza chinhu chaicho chekutarisa pazviri kunoita mutsauko wese. Iko hakuna poindi yekuvhara yako yeku-ita runyorwa neakanaka matekiniki izvo zvisingaite musiyano wakakura.
Neraki, hazvina kuoma kuona kuti ndedzipi nzvimbo dzekutarisisa dzakakosha. Mushure mekutarisira pamusoro pe $ 3 bhiriyoni mukushambadzira kushandisa, taona izvo zvinonyatsoita mutsauko, uye izvo zvisingaiti. Uye izvi zviri, zvisingaite, iwo matatu makuru madhiraivha eUA mushandirapamwe kuita izvozvi:
Tora izvo zvinhu zvitatu zvakadhonzwa mukati, uye zvimwe zvese zvinowedzera zvishoma zvidiki zvekunyengedza hazvizove nebasa zvakanyanya. Paunenge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge tuchitagwa, tichitarisa, uye bhajeti rikashanda uye rikaenderana, nzira dzako dzemushandirapamwe dzinozove noutano hwakakwana zvekuti haufanire kudzingirira nzira dzese dzekunatsiridza dzaunonzwa nezvekuvandudza kusingaonekwe.
Ngatitangei neakakura mutambo-chinja:
Kugadziridza kwekugadzira maoko ari pasi penzira inoshanda kwazvo yekusimudzira ROAS (Dzoka paAd Spend). Nguva. Iyo inopwanya chero imwe nzira yekuvandudza, uye nokutendeseka, tinoiona ichipa mhedzisiro zvirinani pane chero chimwe chiitiko chebhizinesi mune chero rimwe dhipatimendi.
Asi isu hatisi kutaura nezve kungomhanya mashoma ekuparadzanisa-bvunzo. Kuti ibudirire, kugadziridza kwekugadzira kunofanirwa kuve kwakarongeka, kushanda, uye kuenderera.
Isu takagadzira nzira yese yakatenderedza yekugadzira optimization inonzi Kuwanda Kwekuyedza Kuyedza. Zvakakosha zvacho ndezvi:
Chikamu chidiki chete cheshambadziro dzaunogadzira dzinoita.
Kazhinji, chete 5% yemashambadziro akamborova kutonga. Asi ndizvo zvaunoda, handizvo - kwete chete chimwe chiziviso, asi shambadziro yakanaka zvekumhanya, uye kumhanya zvine mutsigo. Musiyano wekuita pakati pevakakunda nevanokundwa wakakura, sezvaungaona pazasi. Iyo chati inoratidza kushambadzira kushandisa kusiyanisa pamazana mazana matanhatu ezvidimbu zvekugadzira, uye isu tinogovera kushandisa zvakanyanyisa pakuita. Iwo mashoma chete eaya mazana matanhatu ma ads akaitwa chaizvo.
Isu tinokudziridza uye kuyedza maviri epakati marudzi ekugadzira: Concepts uye Kusiyana.
80% yezvatinoedza ishanduko pamushambadziro unokunda. Izvi zvinotipa zvinowedzera kukunda apo zvichitibvumidza kudzikisa kurasikirwa. Asi isu tinoedzawo pfungwa - hombe, dzakashinga pfungwa nyowani - 20% yenguva. Pfungwa dzinowanzo tangi, asi pano neapo dzinoita. Zvino dzimwe nguva, ivo vanowana mhedzisiro yekubuda iyo inosimbisazve yedu yekugadzira nzira yemwedzi. Chiyero cheavo vanohwina chinoruramisa kurasikirwa.
Hatitambe nemitemo yakajairika yehuwandu hwehuwandu mukuyedzwa kweA / B.
Mukuyedza kwekare kweA / B, iwe unoda nezve 90-95% chiyero chekuvimba kuti uwane kukosha kwehuwandu. Asi (uye izvi zvakakosha), kwakajairwa kuyedzwa kunotarisa zvidiki, zvinowedzera, sezvinoita kunyange 3% kusimudza.
Hatiedze 3% inosimudza. Tiri kutsvaga angangoita 20% kusimudza kana zvirinani. Nekuti isu tiri kutsvaga kuvandudzwa kwakakura kudaro, uye nekuda kwenzira dzekuverenga manhamba, tinogona kumhanyisa bvunzo kwenguva shoma kwazvo pane yechinyakare a / b kuyedza kungangoda.
Maitiro aya anoponesa vatengi vedu toni yemari uye inotitorera mhedzisiro inokasira nekukurumidza. Izvo, zvakare, zvinotibvumidza kuti iterate kure nekukurumidza zvakanyanya kupfuura vatinokwikwidza. Tinogona kukwidziridza zvekugadzira mune inoshamisa shoma nguva uye nemari shoma pane yechinyakare, chikoro chekare-cheki / b bvunzo yaizobvumidza.
Tinokumbira vatengi vedu kuti vagone kuchinjika pamusoro peyemhando mirau
Kushambadzira kwakakosha. Tinozviwana. Asi dzimwe nguva zvigadzirwa zvemhando zvinotadzisa mashandiro. Saka, isu tinoedza. Iwo bvunzo dzatinomhanya dzinokomberedza maratidziro ekuteedzera nhungamiro haimhanye kwenguva refu, saka vashoma kwazvo vanhu vanovaona, uye saka pane zvishoma kukuvara kune kusagadzikana kwechiratidzo. Isu tinoitawo zvese zvinogoneka kuti tigadzirise zvekugadzira nekukurumidza sezvazvinogona, saka zvinoenderana nemirairi yemirairi tichiri kuchengetedza mashandiro.
Ndiwo akakosha mapoinzi edzidziso yedu yazvino yakatenderedza kuyedza kwekugadzira. Maitiro edu anogara achichinja - isu tinoyedza uye tinopokana neyedu nzira yekuyedza zvakada kufanana neyakagadzirwa yatinomhanya nayo. Kuti uwane tsananguro yakadzama yematanho atinoita isu uye kuyedza 100x kushambadza, ona yedu yazvino blog positi, Facebook Zvinogadzira: Maitiro Ekugadzira uye Kuendesa Mobile Ad Kugadzira paScale, kana bepa redu jena, Kugadzira Dhiraivha Performance mu Facebook Kushambadzira!
Nei Inguva Yekufunga zvakare Kugadzira seMutyairi wekutanga weMushandirapamwe Performance
Kutumidza zita rekugadzira senge # 1 nzira yekuvandudza mashandiro hakuenderane muUA uye kushambadzira kwedhijitari, zvirinani pakati pevanhu vanga vachizviita kwekanguva.
Kwemakore, apo maneja weUA akashandisa izwi rekuti optimization, vaireva kuita shanduko kune kugoverwa bhajeti uye kutariswa kwevateereri. Nekuda kwemiganhu yetekinoroji yatave nayo kusvika nguva pfupi yadarika, hatina chete kuwana danidziro yekuita data nekukasira kuti tiite pazviri uye kuita mutsauko panguva yemushandirapamwe.
Mazuva iwayo akwana. Zvino, isu tinowana chaiyo-nguva kana ingangoita chaiyo-nguva yekuita data kubva kumishandirapamwe. Uye yega micron yekuita iwe unogona kusvina kunze kwemushandirapamwe unokosha. Izvi zvinonyanya kuitika mune inowedzera nharembozha kushambadzira nharaunda, uko zvidiki skrini zvinoreva kuti hapana nzvimbo yakakwana yezviziviso zvina; panongova nenzvimbo imwe chete.
Nekudaro, nepo kunongedza uye bhajeti manenji iri nzira dzakasimba dzekuvandudza mashandiro (uye iwe unofanirwa kushandisa neyekuyedza kuyedza), tinoziva kuyedza kwekugadzira kunorova mabhurugwa kubva pavari vaviri.
Pakati nepakati, vezvenhau vanoisa chete account yeinosvika makumi matatu muzana yekubudirira kwemushandirapamwe wechiratidzo apo iyo yekugadzira inotyaira 30%.
Asi handicho chete chikonzero chekutora laser-yakanangana nekugadzirisa kwekugadzira. Pamwe, chikonzero chakanakisa chekutarisa pane zvekugadzira ndechekuti mamwe maviri makumbo eUA stool - bhajeti uye kunongedza - ari kuramba achiwedzera otomatiki. Iwo maalgorithms kuGoogle Ads uye Facebook atora pamusoro pezvakawanda zvaimbove mabasa eAU maneja ezuva nezuva.
Izvi zvine mhedzisiro ine simba yakati wandei, inosanganisira kuti inorera nhandare kusvika padanho rakakura. Nekudaro, chero maneja weUA anga anga achiwana mukana nekutenda kune wechitatu-bato kushambadzira tech iri kunze kwemhanza. Vanokwikwidza ikozvino vave nekwaniso kune izvo zvakafanana zvishandiso.
Izvi zvinoreva kukwikwidza kwakawanda, asi zvakanyanya kukosha, zvinoreva kuti tiri kutamira kune imwe nyika uko kwekugadzira ndiyo yega mukana wekukwikwidza wakasara.
Zvese zvataurwa, kuchine akakosha mashandiro ekukunda anofanirwa kuve nekutarisisa zvirinani uye bhajeti. Vanogona kunge vasina zvakafanana zvinogona kuita sekugadzira, asi vanofanirwa kufonerwa mukati kana yako yekugadzira isingaite sezvayaigona.
Paunenge iwe wawana iye chaiye munhu wekushambadzira kwaari, uye hafu yehondo yakundwa. Uye nekutenda kune anoshamisa maturusi senge anotaridzika sevateereri (izvozvi zvave kuwanikwa kubva kune ese ari maviri maFacebook neGoogle), isu tinogona kuita zvinoshamisa kusarudzika chikamu chevateereri. Tinogona kupaza vateereri na:
"Kuisira" kana kusanganisa vateereri vakafanana
Vateereri ve "Nesting", patinotora 2% vateereri, toona iyo 1% yenhengo mukati mayo, tobva tabvisa iyo 1% ers kunze kuti tisiye nevakachena 2% vateereri.
Aya marudzi evateereri vepamusoro-soro anotibvumidza kukwidziridza mashandiro padanho iro vamwe vashambadziri vasingakwanise kuita, asi zvakare zvinotibvumidza dzivisa kuneta kwevateereri kwenguva yakareba kupfuura zvataizokwanisa kuita. Icho chishandiso chakakosha pakuita kwakanyanya.
Isu tinoita kwazvo chikamu chevateereri uye rinotarisa basa zvekuti isu tinogadzira chishandiso kuti zvive nyore. Vateereri Builder Express inotitendera kuti tigadzire mazana evateereri vakafanana neanosekesa granular kunongedza mumasekondi. Izvo zvakare zvinotibvumidza isu kushandura kukosha kwevamwe vateereri zvakaringana kuitira kuti Facebook igone zvirinani kutarisisa iyo yepamusoro-yepamusoro kukosha tarisiro.
Nepo zvese izvi zvine hukasha zvevateereri kutarisisa zvichibatsira mashandiro, zvine imwe bhenefiti: Zvinotitendera kuti tirambe tichironga tichirarama uye tichiita zvakanaka kwenguva yakareba kupfuura tisina tarisiro yepamusoro. Yakareba isu tichigona kuramba tichironga tichirarama uye tichiita nemazvo, zvirinani.
Isu tabva kure nzira kubva kuedhi edhisiti pane yekushambadzira seti kana iyo kiyi kiyi nhanho. With mushandirapamwe webhajeti optimization, Kubhidha kweAEO, kubhidha kukosha, uye zvimwe zvishandiso, ikozvino isu tinogona kungo taudza algorithm kuti ndeapi marudzi ekushandurwa atinoda, uye anozoenda otitorera iwo.
Pachine hunyanzvi hwebhajeti, hazvo. Per Maumbirwo eFacebook eScale maitiro akanakisa, nepo mamaneja eUA achifanira kudzoka kumashure kubva kudzora padyo mabhajeti avo, vane nhanho imwe chete yekutonga yasara. Ndiko kuchinjisa chikamu cheiyo yekutenga iyo yavari kuda kunongedza
Saka kana ivo, vachiti, maneja weUA anodikanwa kuti awane dzimwe shanduko kuitira kuti Facebook algorithm iite zvirinani, ivo vanogona fambisa chiitiko chavari kugadzirira padhuze nepamusoro penzvimbo yekumisikidza - kune maapps ekuisa, semuenzaniso. Zvino, data parinenge richiwanda uye vaine shanduko dzakakwana kuti vakumbire chimwe chiitiko, chisingawanzoitika (sekutenga mukati meapp), ipapo vanogona kushandura kwavo kutendeuka chiitiko kunongedzera kune chimwe chinhu chakakosha.
Uku kuchiri kuita bhajeti, mupfungwa yekuti iri kugadzirisa kushandisa, asi iri kugadzirisa kushandisa padanho repamusoro. Asi ikozvino izvo maalgorithms anomhanya zvakanyanya kudivi iri reUA manejimendi, isu vanhu takasiiwa kuti tione zano, kwete mabidi ega.
UA Performance iShio-Makumbo Matatu
Imwe yeaya madhiraivha ekutanga akakosha mushandirapamwe, asi hazvisi kusvikira iwe waashandisa mukonisheni kuti ivo vanotanga kumisa ROAS. Iwo ese chikamu chechirevo chetsoka-makumbo matatu. Regedza imwe, uye kamwe kamwe mamwe maviri haazokubate.
Ichi chikamu chakakura cheunyanzvi hwekushambadzira mushandirapamwe izvozvi - kuunza zvekugadzira, kunongedza, uye kuronga bhajeti pamwechete munzira chaiyo. Kuitwa chaiko kweizvi kunosiyana kubva kumaindasitiri kuenda kumaindasitiri, mutengi kuenda kumutengi, uye kunyangwe vhiki nevhiki. Asi ndiko kunetsekana kwekushandisa kukuru kwekushandisa maneja izvozvi. Kune vamwe vedu, zvinonakidza zvikuru.
Tags: shambadziro algorithmKubhidha AEObhajeti yemushandirapamwemushandirapamwemushandirapamwe wakananganafacebook kushambadzirahuwandu hwekuyedza kuyedzaua mushandirapamwemushandisi kutoramushandisi kutora yekugadzira